Shir Looga Hadlayo Aayaha Gobollada Dhexe Oo Ka Furmay Nairobi & Ahlusuna Oo Qaadacday * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shir Looga Hadlayo Aayaha Gobollada Dhexe Oo Ka Furmay Nairobi & Ahlusuna Oo Qaadacday
Nairobi, Oct 23, 2013, (Mareeg.com): Shir looga hadlayo sidii maamul mideysan oo loo dhanyahay loogu sameyn lahaa gobollada dehxe ee Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Shirkan oo ay ka qeybgalayaan maamullada Galmudug, Ximin iyo Xeeb, ergo ka socota gobolka Galgaduud iyo qaar kamid ah kuwa gobollada dhexe ka jira ayaa waxaa soo qaban-qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumadda Soomaaliya, wuxuuna socon doonaa muddo laba cisho.
Waxaa sidoo kale shirka qeyb ka ah xildhibaanno ka tirsan baarlamaamka Soomaaliya iyo qaar kamid ah deeq bixiyeyaasha.
Safiirka Soomaaliya u fadhiyo Kenya Maxamed Cali Nuur (Ameeriko) oo kulanka furay ayaa sheegay in uu dabo-socda shira bishii June ee sannadkan lagu qabtay Muqdisho.
Wuxuu xusay in shirkan uu diiradda saari doono in dadka dega gobollada bartamaha dalka ay aayahooda iyo mustaqbalkooda ka tashadaan, iyagoo kaashanayo dowladooda.
Ururka Ahlusuna Waljamaaca oo lagu martiqaaday shirkaan ayaa qaadacay iney ka qeybgalaan.
Guddoomiyaha golaha fulinta ee maamulka Ahlu Sunna Sheekh Cabdirisaaq Cali Mire (Al-ashcari) ayaa sheegay inaysan aqoonsan doonin waxa ka soo baxa shirka.
Wuxuu sheegay inaan loo baahnayn faragelin lugu sameeyo mustaqbalka maamullada gobollada dhexe, sidaa darteedna aan laga hordhicin gogol midnimo oo dadka gobollada dhexe ay dhigtaan deegaannadooda oo ay hadda ka jirto nabadgalyo la isku hallayn karo.
Sheekha ayaa ugu baaqay dowladda federalka ah ee Soomaaliya inay fiiro gaar ah u lahaato mas’uuliyadda ka saran degganaanshaha iyo xasilloonida gobollada dhexe ee dalka, isla markaana ay dhammaystirto heshiiskii ay lagashay maamulka Ahlu Sunna.